Volan’ny amnistia : Tsy ho vesaran-tsazy ireo manatitra ny basiny -
AccueilSongandinaVolan’ny amnistia : Tsy ho vesaran-tsazy ireo manatitra ny basiny
Volan’ny amnistia : Tsy ho vesaran-tsazy ireo manatitra ny basiny
Hanomboka ny faha-14 ny volana septambra ho avy izao, dia tsy ho vesaran-tsazy ireo izay mitazona basy tsy ara-dalàna ka manatitra izany eny amin’ ny minisiteran’ ny Fiarovam-pirenena. Io hetsika io, izay tafiditra anatin’ ilay antsoina hoe iray volana ho an’ny amnistia. Ny krizy nifanesy nanomboka ny taona 1972 hatramin’ ny 2009 no nampiparitaka ny basy teto amin’ny firenena ka hetsika ahafahana manangona ireo fitaovam-piadiana niparitaka hatramin’izay ny iray volan’ny amnistia ity. Hopotehina avy hatrany eo imasom-bahoaka ireo basy voaangona. Nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Beni-xavier Rasolofinirina, fa afaka manatrika izany hetsika famotehana basy izany ny olon-drehetra tsy ankanavaka.
Marihina fa manampy sady manohana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny Fanjakana malagasy amin’izao hetsika izao ny amin’ity hetsika ity, ny tetikasany ny “United Nations Regional Center“(UNREC), izay sehatra iraisam-pirenena iray miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana aty Afrika. Araka izany, dia nanome lelavola mitentina 700 000 Dolara ny tetikasan’ny UNREC mba hiadian’i Madagasikara amin’ ny ady amin’ ny fiparitahan’ny basy tsy ara-dalàna eto amin’ ny firenena, ary koa natokana hiantohana ny fanaraha-maso.
Tafiditra anatin’ ny tetikasa ny fametrahana famantarana manokana amin’ny basy io ilay antsoina hoe « Matraquage et Traçage des armes». Aorian’ny hetsika dia hiavaka tsara ny basy ampiasain’ny Polisy sy ny Zandary, ary ny tafika hafahana manavaka ny basy ampiasain’ny olon-dratsy sy ny mampanofa izany. Tsy takona afenina intsony ireo Kalachnickov, PA Makarov, PATT, ary Grenades Defensives sy Offensive sarona nandritry ny « Opération Kidnapping » nivondronan’ny polisy sy ny zandary teto an-drenivohitra ireny. Fitaovam-piadiana mahery vaika, izay tsy tokony ananan’ny olon-tsotra ankoatra ny mpitandro filaminana mantsy ireo hita teny amin’ireo jiolahy tamin’izany. Hatreto, mbola tsy azo antoka hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny filazana fa an’ny mpitandro filaminana tokoa ireo basy tafaverina ireo. Raha misy kosa izany dia sazy henjana no hiandry ireo mpitandro filaminana fantatra fa miray tendro amin’ny jiolahy amin’izany.